Welcome to Aayaha Nolosha » NIN AAN II QALMIN AYUU AHAA, SIDAAS AYAANA FURIIN UGA DALBADAY
NIN AAN II QALMIN AYUU AHAA, SIDAAS AYAANA FURIIN UGA DALBADAY
Dood dheer kadib waxay xaajigeeda ka codsatay inuu furo, wuxuuse weydiiyey sababta, balse way ka diiday inay sababta u sheegto ilaa uu ka furaayo.
Goobtu waa xaafadda Islii magaalada Nayroobi ee dalka Kenya, inkastoo uu ahaa nin dhaqaale fiican heysta oo qurbaha waqti badan ku soo qaatay, haddana isaga iyo xaaskiisa isfaham la’aan ayaa in muddo ah u dhexeeyay.
Is jiid jiid dheer kadib jiritaankii reerkaas waa uu soo dhamaaday oo waa uu furay, sidaas ayuuna reerkoodii ku burburay, hal canug oo ay isu dhaleena iyada ayaa qaadatay.
Maalmo markii ay kala maqnaayeen ayaa qof iyada asxaab iyo ehel la ahaa waxa uu ka codsaday inay wax uga bidhaamiso sababtii ay furiinka u codsatay, waxayna u sheegtay in ninkeeda uu ahaa qof bilaa naxariis ah kaasoo aan xushmad siinin bini’aadamka saboolka ah, dadka naafada ah iyo shaqaalaha, waxay kaloo intaas sii raacisay.
“Awoowgiis oo xanuunsan ayaa la keenay Nayroobi ma uusan booqan oo aniga ayuu ii diray oo $100 ayuu iigu dhiibay, nin indhool ah ayaa nala soo dagay oo daris nala soo noqday wuuna ka raray guriga isagoo dhibsanaya caawimada uu mararka qaar u baahan yahay sida in jidka lagu toosiyo, waliba qolkaas labo bilood ayuu banaanaa oo lacagtiisu nagu socotay.
“Gabar madoow oo muslimad ah oo noo shaqeyn jirtay wuxuu ula macaamili jiray sida qof addoon u ah , labo jeer ayay igu tiri ninkaagu sow muslim ma’ahan, maxaa naxariistii ka qaaday, anoo intaas la yaaban ayuu maalintii dambe u gacan qaaday wiil lugaha cuuryan ka ah waliba meel ummad badan joogto, aad baan arrintaas ula ooyay waxaana raali galin shaqsi ah ugu tagay wiilkii naafada ahaa, mar walba wuu xanaaqi jiray markii aan u sheego xaalado bini’aadanimo oo daran iyo dad dhiban, si walba ma uusan jacleyn dadka daruufeysan.
Intaa kadib waxaan isweydiiyay ninka noocan ah ma aha mid ii qalma, waxaana ii soo baxday in aanan nolol la wadaagi karin, badalkiisana aan u baahanahay nin bini’aadannimada wax ka yaqaana.